रुकुम घटनामा नायाँ कुरा प्रदाफास : रुकुम प्रकरणका घाइते भाइले मिडियामा आएर बल्ल बताए सबै कुरा ! (भिडियो हेर्नुहोस्) – Online Nepal
June 8, 2020 5681
गैरदलित युवतीलाई भगाएर बिहे गर्न रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीगाउँ पुगेका जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विकसहित ६ युवकको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा चार गाउँका बासिन्दा संलग्न रहेको पाइएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान तथा स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सोतीलगायत चार गाउँका बासिन्दाले नवराजसहितका युवालाई लखेटेका थिए ।
युवतीको घरनजिक पुगेपछि त्यहाँका बासिन्दाले चिन्छन् भन्दै ज्याकेट फेरेर पछाडि लागेको घाइते सुदीप खड्काले बताए । तर, उनीहरू युवतीको घर नपुग्दै उनकी आमाले ‘तँ फेरि आइस्, पहिले कु’टेकाले पुगेन, अब त मरेर जान्छस्’ भन्दै गा’ली गरेको सुदीपले बताए । गाली गर्न थालेपछि आमाले थाहा पाएको भन्दै त्यहाँबाट फर्किएको उनको भनाइ छ । त्यसपछि उनीहरू पहिलेको बाटो छोडेर अर्को बाटो फर्किन ओरालो झरेका थिए । ‘
त्यहाँबाट करिब एक किलोमिटर तल झरेर उनीहरूले नाउलो (कुवा)मा पानी खाएका थिए । त्यहीँ घर भएका विनोद मल्लबारे सोधिखोजी गर्दै मोबाइल नम्बरसमेत मागेका थिए । त्यहाँबाट पनि हिँडेपछि ‘पानी खाएर जाऊ’ भन्दै वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लले अलमल्याएको सुदीपले बताए । घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई युवतीको घरबाट त्यहाँसम्म पुग्न ४५ मिनेट लागेको थियो । त्यसपछि चार गाउँका बासिन्दा आएर ल’खेट्न सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
तर, पुलतर्फबाट पनि गाउँले नै आएपछि उनीहरू घेराबन्दीमा परेका प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ । घटनामा घाइते भएका गोविन्द सुनारले भने, ‘सडकको दुवैतर्फबाट ढुं’गा प्र’हार हुन थाल्यो । ज्यान जोगाउन भा’गाभा’ग भयो । को कता गयो ? कसले कति कु’टे ? केही थाहै भएन ।’ ढुंगामुढाले आ’क्रमण हुन थालेपछि सडकमुनिको मकैबारीतिर भागेको उनले बताए । केही स्थानीय बासिन्दाका अनुसार नवराज र उनका केही साथीहरू त्यहीँ समातिएका थिए ।
त्यहाँबाट पनि भागेका युवकहरू करिब ५० मिटर तलको भेरी नदी तरेर पारि जान खोजेका थिए । भँगालो क’टेर बीच बगर र पारि पुगेकालाई पनि कु’टपि’ट गरिएको पाइएको छ । प्रहरीका अनुसार पौडी खेल्न नजान्ने महेश कार्की र डिल्ली विक नदी किनारमै रोकिएका थिए । १० जना नदीमा पसेका थिए ।
उनीहरूमध्ये मदन शाही, भोला बिसी, लालबहादुर खड्का, सरोज भडेल र विभाष पुन पौडिएर भेरी नदीपारि पुगेका थिए । त्यस्तै, आशिष विक, सुनील सुनार, इन्द्रजंग सुनार, गोविन्द सुनार र सुदीप खड्काले भँगालो तरे पनि पारि जान आँट गरेनन् । त्यतिवेला नवराजसहित मृ त्यु भएका ६ जनाको अवस्था कस्तो थियो भन्ने अहिलेसम्म प्रहरी अनुसन्धानमा पनि खुलेको छैन ।
गाउँलेले त्यहाँसम्म पुगेर पनि कु’टपि’ट गरेका छन् । ‘म पनि भेरी तर्न जाँदै थिएँ, तानेर ल्याएर उल्टो हँ’सिया’ले हा’नेँ,’ गोविन्दले भने । भेरी तर्दै गरेका दुईजनालाई स्थानीय बासिन्दाले ढुं’गा हा’नेपछि नदीमा बगेको उनको भनाइ छ । भेरीपारि पुगेपछि पनि त्यहाँ फुटबल खेलिरहेका स्थानीय युवाले कु’टपि’ट गरेको घाइतेहरूले बताएका छन् ।
रुकुम पश्चिमका डिएसपी ठगबहादुर केसीले साढे ५ बजेदेखि घटना सुरु भएको बताए । ‘घटना साढे ५ बजेबाटै सुरु भएको छ, तर प्रहरीलाई ६ः१५ बजे लकडाउन उल्लंघन गरेर आएका मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ भनेर फोन आएको छ । साढे ६ बजे दुईवटा बाइकमा चारजना प्रहरी पुग्दा पनि कु’टपि’ट भइरहेको थियो,’ डिएसपी केसीले भने । भेरी पूर्वतिर वडाध्यक्ष मल्लसहित करिब ६० जनाले कु’ट’पि’ट गरिरहेको देखेपछि प्रहरीले सिठी फुकेको उनले बताए । तैपनि कु’टपि’ट नरोकिएको जनाएको छ ।
घटनास्थल पुगेका प्रहरीलाई पनि वडाध्यक्ष मल्लले केही बनाएनन् । कु’टपि’टमा परेका १२ मध्ये सुदीपलाई चो’ट लागेर र’गत ब’गिरहेको थियो । बाँकीलाई भने ठूलो चो’ट थिएन । काँप्दै गरेको अवस्थामा समातिएका उनीहरूले पनि घटनाको यथार्थ तत्कालै बताउन नसकेको डिएसपी केसीले बताए । राति ९ बजे प्रहरी कार्यालयमा पु¥याएर सोधपुछ गर्दा मात्रै घटनाको रहस्य खुलेको उनको भनाइ छ । पीडित पक्षले भने घटनामा प्रहरीको प्रत्यक्ष मिलेमतो देखिएको आरोप लगाएको छ ।
म भँगालो तरेर नदी तर्न लागेको थिएँ, तर तानेर कु’टे । हँ’सिया, दाउरा र ढुं’गाले हा’ने । हाम्रो गल्ती छैन भनेर बिन्ती गर्दा पनि उनीहरूले कु’टिर’हे । त्यतिवेला धन्न प्रहरी आइपुग्यो । नत्र हामी सबैलाई तिनीहरूले मा’र्थे ।
हामी त रातभरि डरले काँप्यौँ । अहिले पनि कतिवेला के हुने हो ? डर लाग्छ । सबैले सोध्छन्, घरमा पनि गा’ली गर्छन् । अहिले त झन् गाह्रो भएको छ । कहिलेकाहीँ त घरबाटै भागौँ जस्तो लाग्छ । प्रकाश धौलाकोटीले नयाँ पत्रिकामा यो समाचार लेखेका छन् ।
चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमाथि गुरताल र तल गैरीज्युला गाउँ छ । सोतीकै वरिपरि गोहिरी र गेस्मागाउँ छन् । सोती गाउँमा रहेको युवतीको घरनजिक नवराजसहितका युवा पुगेको हल्ला चलेपछि चारै गाउँका बासिन्दा आएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । चारै गाउँमा करिब ६० घरपरिवार छन् । ‘पहिले माथिबाट तर्साएका छन्, तर सडकमा उत्रिएपछि आ’क्रमण भएको छ, त्यसपछि के भयो भनेर घाइतेहरू नै बताउन सक्दैनन्,’ डिएसपी केसीले भने ।
यो घटनामा सबै गाउँ एकत्रित छन् । सबै गाउँका युवा संलग्न भएकाले प्रत्यक्षदर्शीले समेत घटनाको विवरण भन्न आनाकानी गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरू सबैले ‘लकडाउन उल्लंघन गरेर आएका युवाहरूलाई खेदाउँदा खोलामा डुबेर म’रेको’ भन्ने गरेका छन् । गाउँको छेउछाउमा बस्नेहरू अहिले डराएर हिँड्ने गरेका छन् ।
आमैले गा’ली गरेपछि हामी त्यहाँबाट फर्कियौँ । अलि तल आइपुग्दा माथिबाट एक्कासि ढुं’गामु’ढा सुरु भयो । चारैतिरबाट घे’रा हा’ले । हामीले भेरीमा हा’मफाल्नेबाहेक कुनै वि’कल्प नै पाएनौँ । १८ जनामध्ये को कता गए, केही थाहै भएन ।
Prevयी हुन विवाहपछि चटक्क चलचित्रलाई माया मारेर श्रीमानसँग बिदेश गएका नेपाली नायिकाहरु (भिडियो हेर्नुहोस)
लिदी पहिरो : ११ जनाको श*व भेटियो, २७ जना अझै बेपत्ता